MQLs Gafere - You Na-amụba MQMs? | Martech Zone
MQM bụ ego azụmaahịa ọhụrụ. Nzukọ ndị ruru eru na-ere ahịa (MQM) na atụmanya na ndị ahịa na-eme ka ire ahịa na-aga ngwa ngwa ma mụbaa pipeline enweta ego ka mma. Y’oburu n’itughi digi ozo nke ihe ahia gi n’eme ka ndi ahia gi merie, o bu oge itughari ohuru ohuru. Anyị abanyela na mgbanwe mgbanwe egwuregwu site na ụwa nke ndị MQL gaa ụwa nke mkparịta ụka-njikere na-eduga bụ isi ahịa azụmaahịa.
Egwuregwu ahụ abụkwaghị naanị nọmba; mgbasa ozi ahịa taa bụ maka itinye ndị ahịa n'ọrụ n'ụzọ dị ezigbo mkpa nke na-ewulite ntụkwasị obi yana - n'ikpeazụ - mmekọrịta siri ike. Nke a dị mkpa ugbu a, m na-ebu amụma na ọ ga-adị ka post-COVID, n'ihi na ahịa dijitalụ ga-ebugharị pipeline ahịa, nke bụ isi ihe ngosi nke uto ego.
Ndị na-agụ blọgụ a ga-ama nke ọma banyere olulu na ire ahịa, ihe ngosi anya nke mmekọrịta ọ bụla ma ọ bụ mmekọrịta ndị ahịa na azụmahịa gị. Ọ na-akọwapụta n'ụzọ dị mkpirikpi njem nke atụmanya a na-amaghị ama na-ewe site n'amaghị ihe ọ bụla gbasara ụlọ ọrụ iji bụrụ otu n'ime ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe. N'otu aka ahụ, ọ nwere ike soro ohere ire ere ma ọ bụ gbagote na akaụntụ dị adị maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụụ. N'agbanyeghị etu anyị siri arụ ụka banyere izi ezi na nrụpụta ọrụ nke olulu ahụ, otu ihe doro anya: ọ bụ ebe a ka ọ nọrọ!
A na-ahụkarị ụdị ahịa B2B na ịre ahịa maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka oge tupu COVID na eserese dị n'elu. Malite na olulu ahụ, nke nwere ike ịbụ ihe atụ ebe ị nwere narị puku puku ndị ọbịa na ihe omume gị ma ọ bụ weebụsaịtị, yana atụmanya ị lekwasịrị anya na mgbasa ozi mgbasa ozi gị. Nke a bụ usoro mgbasa ozi nke ọdịnihu gị. Otu ụlọ ọrụ n'ozuzu ha nwere ike ịtụ anya ihe dịka 5% ntụgharị, nke na ihe atụ a ga - eweta ihe ruru 5,000 na - eduga.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịkọ na ịzụlite ụzọ ndị a ma gbanwee ha na MQL (ndị ahịa ruru eru) dabere na ọkwa mmasị nke ụzọ egosipụtara na akara ma ọ bụ ngwaahịa anyị. Nke a na-abụkarị ebe ahịa aka na-eme, yabụ ahịa nwere ike iru ndu ndị a wee gbanwee ha ohere dịka akụkụ nke pipeline ahịa.
Maka ọtụtụ ọrụ ahịa na ahịa B2B, 1% nke ndị na-eduga na-agbanwe. N'ihe atụ a, malite na ihe gbasara 5,000 na-eduga, otu ga-ejedebe banyere mmeri 50. Rịba ama na metric a nwere ike ịdịgasị iche dabere na ọnụahịa ire ere, ụdị ụlọ ọrụ, na ogologo nke usoro ahịa.
Coronavirus Agbanwe Agbanwe Funnel ahụ
Ọrịa a na-efe ugbu a na-emetụta ọkwa ọ bụla na olulu a. A ga-ebelata elu olulu a n'ihi na ị gaghị enwe ọtụtụ puku ndị ọbịa na ihe omume onwe onye, ​​okporo ụzọ na ihe omume ndị ọzọ. N'ezie, nke a na-ebelata ọnụọgụ ndu.
N'ezie, COVID-19 na-emetụta ntụgharị n'ime olulu ahụ. Nke a bụ eziokwu karịsịa n'etiti olulu ahụ ebe aka n'etiti ahịa na-eduga ahịa na-eduga ahịa. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ ogbo ebe imirikiti atụmanya na itinye aka na ndị ahịa-ọkachasị maka azụmaahịa B2B. Ọ bụ ebe a ka ihe omume na mmemme niile akagbuchara na-emetụta mmekọrịta mmekọrịta dị mkpa nke mmadụ chọrọ iji megharịa ụzọ site na ọkpọkọ ọkpọkọ n'ụzọ niile banye ohere ahịa dị ọkụ.
Nke a bụ nnukwu nsogbu nye anyị ndị ahịa. Dika eserese nke abuo na-egosi, obu ezie na uzo ntughari site na olulu a dika odi ka odi ala, onu ogugu nke mmeri na-adaba site na 50 rue 20. O di mfe mgbakọ na mwepụ; ka ị na-aga n’olulu ahụ, ọbụlagodi obere pasent ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ọnụọgụ mmeri.
Tọghee More na-eduga ná Mmeri, Ọsọ ọsọ
Na nzaghachi, ndị otu ahịa ahịa dijitalụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga nke ọma na-agbago ugbu a na egwuregwu ha. Ha na-elekwasị anya na ịmepụta ọtụtụ narị ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ puku MQMs: nzukọ ruru eru ahịa. Ndi otu a kwubiri na o zughi ezu inyefe MLQ. N'ezie, MQLs ka dị mkpa, mana ọ nweghị ịgọnahụ na ị gaghị enwe ike ịkwụsị njem gị na ịmepụta MQLs site na ndu ndu. Ihe achọrọ bụ ebe ga-enyere gị aka inwe mmekọrịta dị mkpa na onye ahịa nke dị oke mkpa iji zụọ ndị ahịa, ịza ajụjụ, ịza nzaghachi, na ijikwa mkparịta ụka.
Ihe omume mebere, webinars, na ihe niile usoro mgbasa ozi chọrọ-ọgbọ nwere ike ịchụpụ atụmatụ itinye aka na ndị ahịa yana atụmanya ruru eru iji gụkwuo agụmakwụkwọ ha, ịtụle echiche, wee si otú ahụ na-eme ka ha gaa njem ha. N'ihi nke a, m ga-arụ ụka na MQMs bụ MQL ndị dị mkpa karịa na ihu igwe ahịa anyị ugbu a.
MQMs dịkwa ọtụtụ maka na ha nwere ike ịkọwapụta dị ka CTA nke ọma (kpọọ oku) na mmemme mmemme ahịa dijitalụ gị niile na ihe omume ọhụụ. Gaghị achọ inwe nzukọ ndị ahịa n’elu ndu ndị ahịa?
Nzukọ Ndị Ahịa Virtual Nwere Ike Fordị Vardị Dị iche iche
Tụlee eserese a, nke na-egosi ụdị dị iche iche nke nzukọ ndị ahịa B2B nke anyị nwere ike ijikwa ugbu a.
Yabụ, ọ bụrụ na nzukọ ndị ahịa na ndị ọkachamara na ndị isi ọrụ bara uru karịa ndị ndu, kedu ka anyị ga - esi mepụta ọtụtụ n'ime ha? N'ọnọdụ nkịtị, mgbe ndị ahịa chọrọ ịhụ ngosi, ha nwere ike ịhụ ya na ihe omume ma ọ bụ n'okporo ụzọ ma ọ bụ nnọkọ nkwụsị. Maka ọdịnihu na-abịanụ, mmemme ndị a kwesịrị ịdị na-eme eme. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na onye ahịa rịọrọ ka ya na onye isi ndị okenye nwee nzukọ tupu ya etinye ego ịzụta ọtụtụ nde, nke a nwere ike ịme ihe n'ụzọ dị mfe.
Otu ihe ahụ na-aga maka okpokoro okirikiri na ndị mmekọ, ndị nkesa, na ndị ahịa, yana ọnọdụ ọ bụla ebe ọtụtụ mmadụ ga-ezukọ iji dozie nsogbu ma kwurịta azịza ya. Webinars ugbu a bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị ike iji mee ka njem onye njem niile dị ngwa, yana nnọkọ na ndị ọkachamara na-adịkarị mkpa iji mee ka ndị ahịa kwenye ịbanye na teknụzụ ọhụụ ma ọ bụ ngwọta ọhụrụ. Nzukọ ndị Mmekọ bụkwa isi maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ịchụ ahịa ha. Nzukọ ndị ahịa B2B ndị a niile dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị ma enwere ike ịmepụta site na ijikọta MQMs n'ime atụmatụ azụmaahịa dijitalụ gị.
Chee echiche otu nzukọ gị nwere ike isi mepụta MQMs
Nke a bụ isi ihe: ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite uto ego gị, ịkwesịrị itolite pipeline gị. Ihe dị elu nke ego gị na-enweta, ka ị na-enwekwu pipeline ị chọrọ - pipeline gị bụ ihe na-egosi ego ị na-enweta (nke a bụ ihe na-egosi na ị na-aga ahịa ahịa).
Zọ kachasị sie ike ịkọ pipeline gị bụ ilekwasị anya na ịbawanye nzukọ ndị ahịa B2B gị na mmekọrịta gị na ndị ọzọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ: MQM na-anya paịpụ, nke na-akpata nkwụnye ego.
Ihe omume MQM na-aga nke ọma ga-ewepụta nnukwu olu nke arịrịọ nzuko, na ndị a ga-ejikwa nlezianya jikwaa ya ma nyochaa maka ịdị irè na ịgbaso. Tọlite ​​nzukọ na atụmanya ma ọ bụ onye ahịa nwere ike ịchọ ka 14 dị na ozi ịntanetị ma kpọọ ma ọ bụrụ na ejiri aka gị, yabụ ụlọ ọrụ ndị dị mkpa gbasara MQM na-eji ikpo okwu akpaaka nzuko (MAP).
By na-agbakwunye MAP na teknụzụ ahịa gị ị ga - enwe ike ịbawanye ike MQM gị n'ihi na ọ ga - arụ ọrụ mpaghara atọ ndị buru ibu oge na - arụ ọrụ: usoro ịhazi nzukọ (nhazi usoro nzukọ maka ndị bịara ma hụ na nke ọ bụla nwere ozi achọrọ iji mee ka nzukọ ahụ gaa nke ọma); njikwa ọrụ (nye ndị njikwa nzukọ, ma ọ bụ ndị otu ahịa ahịa ikike iji lelee arịrịọ niile na nkwenye nzute, iji hụ na enwetara ozi ahịa dị mkpa, jikwaa lọjistik nzuko); na post-nzukọ nchịkọta (nzukọ na-emetụta ego metrics dashboards, management nke nnyocha iji ghọta arụmọrụ na asịwo ebumnuche).
Maapụ Jifflenow Ezubere maka naanị ebumnuche nke ịhazi usoro ihe omume na njikwa nke nzukọ B2B ma ọ bụ nke mmadụ. Jifflenow ga - enyere gị aka ịgbanwe mmekọrịta mmekọrịta gị na atụmanya na ndị ahịa gaa nzukọ bara uru nke, n’aka nke ya, nwere ike inye aka kwalite paịpụ ahịa na ibelata usoro ahịa ahụ.
Mụtakwuo Banyere Jifflenow
Tags: ahịa b2busoro ntughariCOVID-19chọrọ ọgbọnzukọ ndị isijifflenowmap jifflenowahia na-eduganzukọ akpaaka n'elu ikpo okwummkwmmmqokpokorooppMkpagbuire ohia na ire ahiaụlọ nkwonkwo ahịaahịa ruru erusqlwebinars